Mgbe niile Ultra Normal Size 1 Sanitary Towels With Wings 14 Pack (Tesco) | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Always Ultra Normal Size 1 Sanitary Towels With Wings 14 Pack (Tesco)– Ordrs
Mgbe niile Ultra Normal Size 1 Sanitary Towels With Wings 14 Pack (Tesco)
Ọ dịghị ụmụ nwanyị abụọ bụ otu, mana mgbe niile Ultra Normal (Size 1) nwere nku na-enye ihe ruru 100% nchekwa maka ọdịdị na agba gị pụrụ iche. Ezigbo maka ọkụ na-agba ọsọ na S na M knicker size ma ọ bụ na-agafe agafe na S knicker size. Ugboro ole na ole nwere akwa nhicha nwere ihe mkpuchi na mkpuchi mmiri (nke na-enweghị ike ihi mmiri) nke na-adọta n'ime mmiri iji nyere aka gbochie nkwụsị. Ha nwekwara Odor Neutralizing Technology nke na-ekpuchi odors ma ghara ikpuchi ha. Ọ bụ ezie na akwa nhicha ahụ dị ọcha mgbe niile dị naanị 3mm, ha na-enye nnukwu nkasi obi na nchedo n'oge oge ịhụ nsọ gị. Wegharia iwu na mgbe nile MyFit, ma nweta odida-adighi-efu maka udi na iru gi. Gbalịa mgbe niile Ultra Secure Night (Size 4), Always Ultra kacha mma ịdị ọcha akwa nhicha maka abalị nchedo .. Ruo 100% leakage nchedo. Super absorbent isi na mmiri mmiri-kpochidoro jel na-apụghị ihihi. Odor Neutralizing Technology gbachiri isi, anaghị ekpuchi ya anya ma nwee ísìsì ọkụ. Akwa nhicha a nwalere na dermatologically iji dị nro na anụ ahụ. Ala elu. Secureguard contours na-egbochi mmiri mmiri. 3mm mkpa n'ihi na a oké mmetụta nke nkasi obi. Nwere nku iji debe akwa nhicha ebe. mgbe niile.